किन कोरियामा नेपालीको बिजोग? सयौँको मृ’त्यु, ४८ आ’त्मह’त्या – " कञ्चनजंगा News "
किन कोरियामा नेपालीको बिजोग? सयौँको मृ’त्यु, ४८ आ’त्मह’त्या
No Comments on किन कोरियामा नेपालीको बिजोग? सयौँको मृ’त्यु, ४८ आ’त्मह’त्या
दक्षिण कोरियामा रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तर्गत आएका पाल्पाका कुशबहादुर थापाले दुई साताअघि आ’त्मह’त्या गरे। दिनभर कम्पनीमा काम गरेका उनी बेलुकी ओभरटाइम नगरी सबैभन्दा पहिले कोठा फर्किएका थिए। उनीसँगै काम गर्ने नेपालीहरू आफ्नो काम सकेर फर्कंदा उनी कोठामा भेटिएनन्। राति अबेरसम्म कोठामा नआएपछि सोधीखोजी गर्दा उनी शौचालयनजिकै मृ’त अवस्थामा भेटिए।
कोरियन भाषामा दख्खल राख्ने थापा आफ्नो काममा निकै दक्ष थिए। त्यसैले उनले कम्पनीमा नेपाली कामदारको टिम लिडरको जिम्मेवारी पाएका थिए। पहिलो कार्यावधि सकेर उनी क्षमताकै कारण दोस्रोपटक कोरिया आएका थिए। ‘अर्काको देशमा काम खोज्दै आएपछि मिलेर काम गर्नुपर्छ’ भनेर उनी अरूलाई सम्झाइरहेका हुन्थे।
घ’टनाको अवस्था हेर्दा उनले आत्महत्या गरेको भन्नै गाह्रो थियो। तरकारी काट्ने चक्कुले घाँटीमा प्र’हार गरेको चो’ट थियो। ‘घ’टना शंकास्पद देखिएकाले कम्पनीका सबै नेपालीलाई प्रहरीले लिएर गएका रहेछन्।
धन्न, सीसीटीभी फुटेज हेर्दा आ’त्मह’त्या भन्ने पुष्टि भयो,’ पोछन क्षेत्रमा भाषा अनुवादक काम गर्दै आएका मुक्त गुरुङले भने, ‘कम्पनीमा सबै स्थिति राम्रै देखियो, तलब र सुविधा पनि नियमित रहेछ। उनले किन आ’त्मह’त्या गरे, बुझ्नै सकिएन।’
सुर्खेतको पञ्चपुरीका २३ वर्षीय थीरबहादुर दर्लामी पनि थापा जसरी नै अनेकौं सपना बोकेर दक्षिण कोरिया आएका थिए। तर उनले आइपुगेको १७ दिनमै औद्योगिक दु’र्घटनामा परेर ज्या’न गुमाए। थेजन सहरमा रहेको पानीजहाजको डाई बन्ने कम्पनीमा उनले जम्मा ११ दिनमात्रै काम गरे।
गत अक्टोबर ११ का दिन दु’र्घटनामा परेका उनको उपचारको दोस्रो दिन मृ’त्यु भयो। ‘कम्पनीमा सहकर्मीको असावधानीका कारण दु’र्घटना भएको देखिन्छ।भुइँमा बसेर काम गरिरहेका दर्लामी फोरक्लिप (सामान उचाल्ने गाडी) ले तयार भएको डाई निकाल्दा अर्को डाइमा ठोक्किएर च्यापिएका थिए,’ सुर्खेत समाजका अध्यक्ष लोकेश खत्रीले भने, ‘कम्पनी र फोरक्लिप चलाउनेको गल्ती हुँदाहुँदै पनि यसमा कुनै कारबाही भएन।’
नेपाली राजदूतावासले पनि घ’टनालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको उनको गुनासो छ। भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि सजिलो काम र राम्रो दाम पाइने भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा कोरिया आकर्षक मानिन्छ तर यहाँ कामदारका अनेक दुःख छन्।
दैनिक कार्य अवधि १२ घण्टाभन्दा बढी नै हुन्छ। भाषा समस्या उस्तै छ। सन् २००७ मा सुरु भएको ईपीएस खुलेसँगै कोरिया आएर काम गर्ने नेपालीको संख्या बढेको हो। यस अवधिमा ६२ हजार २ सय २७ जना नेपाली कोरिया आएका छन् । हाल यहाँ कार्यरत नेपालीको संख्या ३५ हजार ५ सय ८१ छ । यिनमा महिलाको संख्या २ हजार १ सय ७६ छ।
संख्या बढेसँगै विभिन्न कारणले ज्या’न गुमाउने नेपाली पनि बढेका छन्। ईपीएस सुरु भएपछि अहिलेसम्म १ सय ८१ जना नेपालीले ज्यान गुमाएको रेकर्ड नेपाली दूतावासमा छ। यो खबर आजको कान्तिपुरमा गोकुल थोकरले कोरियाबाटै लेखेका छन्।
भिन्न रोग र सुतेकै अवस्थामा ज्यान गुमाउनेको संख्या ८४ पुगेको छ। औद्योगिक र सडक दु’र्घटनामा ज्या’न गुमाउनेको संख्या ४७ पुगेको छ भने आ’त्मह’त्या गर्ने ४८ जना पुगेका छन्। दुई जनाको ह’त्या भएको दूतावासको तथ्यांकमा छ।
← आइतबार सूर्य देवलाई यस मन्त्रद्वारा अर्घ दिँदा हुन्छ फलिफाप → १४ वर्षीया बालिकालाई ६९ वर्षका वृद्धाले गरे क रणी